Riyo | February 2020
Sida loo dhiso riig riyo ah oo adiga kuu gaar ah: talooyinka wax ku oolka ah
Shaki la'aan, xaaladda ugu muhiimsan ee wax soo saarka xayawaan kasta waa caafimaad, waxaana lagu xaqiijin karaa oo kaliya iyadoo la fulinayo shuruudaha ugu muhiimsan ee xabsiga. Haddii su'aashu tahay mid ku saabsan ilaalinta riyaha, ka dibna waa muhiim in la ogaado in aan loo baahnayn qolka aad qaadatid, xayawaan, xasillooni, guri dabaq ah, ama wax qaas ah oo la dhisay, waxa ugu muhiimsan waa in meeshani aysan keenin cuduro iyo geerida xayawaanka.
Maxaa la siinayaa riyaha?
Riyaha waa xayawaan aan wax qabad la'aan aheyn. Waxay u eg yihiin nolol kasta, waxay ubaahantahay fitamiinno, macdano, waxyaabo isku dhafan oo gacan ka geysanaya jirka si ay u shaqeeyaan una horumariyaan si habboon. Maaddaama qaar ka mid ah noocyada riyaha ay siiyaan caanaha, waa inay leeyihiin cunto haboon.
Cuntada caruurta: sida loo quudiyo
Nafaqada habboon ee carruurta laga bilaabo maalmaha ugu horreeya nolosha ayaa aasaas u ah aasaasiga caafimaadkooda iyo difaaca mustaqbalka. Haddii xayawaanku markii hore la cuno si qalad ah, markaa waxay u badan tahay in xayawaanku si khaldan u kori doono, ma awoodi doono inuu sameeyo hawlaha taranka. Sidaa daraadeed, arrinta aruurinta cuntada ee riyaha yar yar waa mid aad u muhiim ah oo u baahan fiiro gaar ah.
Dadka muwaadiniinta ah ee ku hadla cudurka furuqa ayaa si xasaasi ah u xasuusiya in cudurkan bani'aadamnimo ee xun, oo u qalmay magaca magac xun "geerida madow", laga adkaaday tallaal ballaaran oo qarnigii la soo dhaafay. Laakiin dadka tuulada, gaar ahaan meelaha ay ka mid yihiin idaha dhaqanka iyo ariga duurjoogta ah, uma badna inay ka fekeraan dadka - iyaga, idaha iyo riyaha goonida iyo maanta ilaa maanta waxay u taagan yihiin halis weyn oo ah ganacsigooda xoolaha.
Talooyin iyo xirfado riwaayad ah
Rida - mid ka mid ah meelaha ugu faa'iidada badan ee xayawaanka. Waxsoosaarka ariga waxaa ka mid ah hilibka, caanaha, dhogorta, hoos iyo maqaarka. Faa'iidada ugu weyn ee riyaha ayaa ku jira iswadaarsigooda sarreeya, sidaas darteed naas-nuujinta guriga ma kuu keeni doonto dhibaato badan. Sidee loo doortaa ariga Arooska riyaha ah waa in lala yimaadaa dhammaan masuuliyada.
Ketosis ee ariga: calaamadaha cudurka, daaweynta
Maanta, riyaha lo'du waxa uu noqday mid aad u jecel beeraha. Waxyaabaha ay ka kooban tahay waa ganacsi aad u faa'iido leh sababtoo ah sifooyinka wanaagsan ee caanaha riyaha, qiimaha sarreeya marka la barbardhigo lo'da iyo fudeydka daryeelka ee xayawaankani, laakiin mararka qaar dhibaatooyin ayaa soo baxa. Mid ka mid ah dhibaatooyinkaan waa ketosis.
Dhowaan, soosaarka caanaha buuggu wuxuu hoos u dhacay taariikhda maaha kaliya beeraha waaweyn, laakiin sidoo kale beeraha gaarka loo leeyahay. Waxaa lagu beddelayaa habka ugu fudud ee helitaanka alaabta waxtar leh ee xayawaanada - isticmaalida mashiinka caanaha. Habkani wuxuu ku dabaqi karaa oo kaliya in lo'da, laakiin sidoo kale xayawaanka kale, gaar ahaan, riyaha.
Cudurrada riyaha iyo kuwa gaarka ah ee daaweyntooda
Goat waa xayawaan caan ah oo bixiya caano tayo fiican leh. Waxay aan qabyo ahayn, si fiican u habboon xaalad kasta, cuno ku dhawaad ​​dhammaan cuntada, waxay si fudud u heleysaa cuntada iyo, iyada oo daryeel iyo shuruudo habboon, aysan dhibaato lahayn. Riyaha ayaa si aad ah u xanuunsan, laakiin waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida loo ogaado waxa xayawaanku uusan sameyn iyo sida loo daaweeyo.
Riyaha guryaha waa la kiciyaa si ay u soo saaraan hilib, caano, fur iyo maqaar. Kuwa raba in ay sameeyaan ariga riyaha ayaa ah kuwa ugu daneynaya su'aasha ah ee caanaha roodhida ah ee soo saari kara mudo cayiman ah oo ay jilciso hoggaamiyahan tilmaamahan. Aynu isbarbar dhigno. Xayawaanka da'doodu tahay da'da caanuhu waxay bilaabaan inay bixiyaan caanaha. Sida xayawaanka oo dhan oo ka mid ah fasalka xaasiga ah, riyaha waxay leeyihiin caano xilliga ka dib dhalashada, sababtoo ah ujeedada ugu wayni waa in ay quudiyaan caruur.
Baruurta Goat: Waa maxay faa'iido leh, waxa la daweynayo, sida loo dhalaalayo
Baruurta Goat ayaa si weyn loo isticmaalaa karinta cuntada iyo cuntooyinka kala duwan ee daawada dhaqameed muddo dheer. Marka si habboon loo isticmaalo, daaweyntan ayaa ka caawineysa inay la qabsadaan qufaca, cudurada lafdhabarka, cudurada caloosha, dhibaatooyinka maqaarka, iwm. Meelaha uu leeyahay alaabta, iyo sida loo diyaariyo daaweyn mucjiso ah, waxaan tixgelineynaa maqaalkani.
Milkiilayaasha riyaha badanaa waxay ka cabanayaan in xayawaanku si weyn u yaraatay dhalidda caanaha ama caanaha oo dhammaystiran. Si loo fahmo sababaha hoos u dhigista dhalidda caanaha, waxaa lagama maarmaan ah in la falanqeeyo xaaladaha riyaha lagu hayo, iyo sidoo kale waxa iyo sida loo quudiyo. Haddii ay lagama maarmaan tahay in laga cabsado dhicis shinni ah Maalin maaliyadeed mar walbo ma siinayso caano isku mid ah.
Riyaha Mastitis: Sababaha iyo Daaweynta Cudurka
Ka ilaalinta riyaha ee beeraha waa wax faa'iido leh, inkastoo dhib badan. Xayawaanada waxay u baahan yihiin taxaddar taxadar leh, maadaama xaaladaha guriyeynta liita ay ka xanaajinayaan muuqaalka cudurka lo'dooda, taas oo ay ugu wacan tahay mid si weyn uga lumaysa faa'iidada iyo xitaa lumiso xoolaha. Mid ka mid ah cudurradani waa naas nuujinta.
Dhibaatada ariga: Calaamadaha iyo Sida loo Aqoonsado
Marka goosashada riyaha, geedi socodka malaaku waa mid aad muhiim u ah. Si aad wax kasta oo sax ah u sameyso iyo waqtigeeda, waxaad u baahan tahay inaad awood u yeelatid inaad go'aamin kartid goosashada riwaayadda. Maxay tahay ugaadhsiga? Ugaarsiga ayaa ah rabitaanka wada shaqaynta; Nidaamkan waxaa sidoo kale loo yaqaan 'estrus'. Xayawaan kala duwan ayaa si kala duwan u leh.
Riyaha yaryar waxay si weyn u kobcin karaan beertaada alaabada qiimaha leh: caanaha, hilibka, dhogorta iyo maqaarka. Si xooluhu u koraan oo u caafimaad qabaan, beeralayda waxay u baahan yihiin inay ogaadaan calaamadaha uurka iyo xoolaha. Ku saabsan sida riyaha loo yiraahdo riyaha, sida loo go'aamiyo in xayawaankaagu dhowaan wanaajin doonaan, sida loo barto hababka suurtagalka ah ee dhalmada iyo waxyaabo kale oo ku saabsan taranta xoolaha waxaad ka baran doontaa maqaalkan.
Waa immisa kharashka roodhiga u baahan yahay jiilaalka iyo sida loo diyaariyo
Goynta lo'da ee riyaha xilliga qaboobaha waa shaqo adag oo waqti-badan ah, nolosha iyo caafimaadka xoolaha bilaha badan waxay ku xiran tahay go'aankeeda saxda ah iyo waqtigeeda. La shaqee banaanbaxyada waa inay bilaabaan dhammaadka gu'ga ama xagaaga hore iyo ha iska dhigin ilaa xilliga dayrta si looga fogaado dhibaatooyinka iyo khalkhalka.
Sababta ugu weyn ee beeraha lo'da ah waa awooda xayawaanka si ay u dhalaan caruur. Tani mulkiiluhu waa inuu si fiican u yaqaanaa sida haweenku u dhaqmayso marka ay timaaddo. Iyo, dabcan, waxa la sameeyo haddii taasi aysan dhicin iyo sababta. Goorma ayuu ugaarsiga u bilaabaa caadi ahaan? Qaangaadhka riyaha yar yar wuxuu ka bilaabmaa 7-9 bilood, laakiin waxaa lagu talinayaa marka dheddigu gaaro 1.5 sano.
Sidee loo gooyaa oo jarjaraa ariga
Riyaha xoolaha ee guriga dhexdiisa ah waxay ku lugleeyihiin gawaarida iyo jarista. Raacitaanka tiknoolojiyada saxda ah ee gawaarida xayawaanka waxay u oggolaanaysaa in maqaarkiisa iyo dhogorta ay daboolaan xaalad wanaagsan, waxayna sidoo kale saameyn wanaagsan ku yeelaneysaa dhadhanka hilibka. Sidee si sax ah u gawracaan riyaha iyo kala qaybinta baqtigaa, aynu aragno.
Xayawaanno badani waxay ku hayaan riyaha ma aha oo kaliya ujeedada helitaanka caanaha, laakiin sidoo kale loogu talagalay taranta, sidaa daraadeed, dheddigga haweenka iyo labka ah ee muuqaalka riyaha ayaa la fuliyaa. Si loo ilaaliyo caafimaadka haweenka iyo in la hubiyo in ay soo baxaan caruurtooda, waa inaad ogaataa sida loo hubiyo xaamilada xayawaanka, awood u leh inay si habboon u bixiyaan oo ay u siiyaan daryeelka lagama maarmaanka ah ee riyaha iyo dhalaanka cusub.
Sidee baad u wici kartaa riyaha?
Dhalashada ilmaha ee qoysku waxay keenaan dareeno badan oo wanaagsan, kiiskuna waxa weeye su'aasha ah in la doorto naanayste loogu talagalay dhalaanka markiiba soo baxa. Riyaha yar yar ayaa si aad ah ugu qiyaasi kara tababarka, waxay aqoonsadaan milkiilayaasha oo ku soo lifaaqaan iyaga, sidaa darteed doorasho magac loogu talagalay waa in si aad ah loo wajaho.
Caadi ahaan riyaha waxaa loo jajabiyaa ujeedka ujeedada helitaanka caanaha, maadaama ay tahay nafaqo badan oo ka caafimaad badan lo'da. Dabcan, haddii caannaanta laga helo caanaha, tayada ayaa si weyn loo yareeyey, iyada oo faa'iidada ganacsigu hoos u dhacdo. Mid ka mid ah badi la'aanta caanaha ee caanuhu waa dhiig. Ogow sababta ay u muuqato iyo sida looga hortago.